Aiza no azonao hividianana lamandy?
Aza menamenatra raha mieritreritra ny hividianana lamandy ho an'ny tranokalanao ianao mba hanatsara ny lanjany. Tena azo ekena ny fivarotana nomerika amin'izao fotoana izao izay tsy ho vita mihitsy ny famokarana sotro raozy. Hodinihinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny antony mahatonga ireo mpivarotra an-tserasera hanapa-kevitra hividy rindran-taratasy ary ahafahana mividy siramamy mifandraika amin'ny vidiny mora.
Antony mety hividianana rindran-damba tsara
Amin'izao fotoana izao, ireo orinasam-pandraharahana lehibe sy orinasa madinika dia mampiasa vola be dia be ao amin'ny rindran-damosiny. Andeha hodinihintsika ny anton'izany.
Ny fotoana mahavelona
Amin'ny ankapobeny, ny tetikasa fananganana fotodrafitrasa fotsy sy mainty hoditra dia mitaky fotoana be loatra. Raha mifantoka amin'ny paikady fanorenana rohy ianao, dia ho voatery handalo ny isan'ireo dingana fanadiovana ianao, manomboka amin'ny fanokafana ny kalitaon'ny kalitao sy ny famaranana amin'ny fanandramana paikady fitarihana samihafa. Ankoatra izany, raha te hanana fiainana ivelan'ny fanangonana jiosy mifandraika amin'ny tranokalanao ianao, dia mila mamorona rafitra sy rafitra samihafa ianao, indrindra fa amin'ny fanampiana matihanina. Ary mazava ho azy, ny hanao ny zava-drehetra araka ny drafitra, dia mila manakarama mpitantana ny tetikasa na mifehy ny zava-drehetra amin'ny tenanao ianao. Midika izany fa tsy mividy bakio toy izao ianao, mividy ny dingana manontolo izay mamonjy tanteraka ny fotoanao sy ny vola aorian'izany. Noho izany, ny tombony voalohany amin'ny fividianana rohy dia ny famonjana ny fotoana.
Valiny avy hatrany
Eritrereto hoe manapa-kevitra hanangana fanentanana fananganana rohy ianao. Raha tsy manana traikefa sy fahalalana marina ianao ao anatin'ity sehatra ity, dia mety ho farany amin'ny vokatra tena mahantra ianao ary miresaka momba ny SEO na orinasa SEO. Raha izany no mitranga, ny fividianana rindran-damba tsara dia hanome valiny haingana. Tsy mila mandany fotoana hianarana ny fomba hanaovana izany ianao ary afaka mifantoka amin'ny raharaham-barotrao.
Aiza no hividianana rindran-dalàna?
Sarotra mampidi-doza ny mividy rohy amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo, indrindra raha tsy fantatrao ny fomba fiasany. Azoko atao ny mampitaha ny dingan'ny fananganana rohy amin'ny fandidiana. Raha manao fahadisoana farafaharatsiny ianao amin'ity dingana ity, dia hiafara amin'ny laza ratsy lazain'ny tranonkala ianao. Amin'ity andininy ity, manangona ireo rindrambaiko fanamafisana ny rindram-baiko izay azonao itokisana ny tranonkala fanatsarana ianao.
Toro-làlana maharitra maharitra ny fivarotana raharaham-barotra. Azonao atao ny manolotra loham-baovao mahazatra ao amin'ny loharanom-baovao samihafa izay mety hahitanao ny raharahanao. Ny habetsaky ny rohy misy ny rohy dia mifototra amin'ny avo DA satria ny PR izao dia efa lany andro. Na izany aza dia mbola misy foana ny backlinks PR misy. Raha tompon'ny tranokala ianao miaraka amin'ireo pejin'ny topy, dia azonao atao ny manoratra ny loharanon'ny tranonkalanao momba ny vola miditra amin'ny finday tsara indrindra
Ity serivisy amin'ny aterineto ity dia tsy mihevitra ny tenany ho brokerage rohy. Orinasa dizitaly iray manontolo no manana tranokala manan-danja amin'ny tranonkala miara-miasa amin'izy ireo. Ny fividianana ny iray amin'ireo SEO azy ireo, ianao dia mahazo fahafahana hahazo ny kalitao, ary ny zava-dehibe indrindra, ny lisitra mahazatra. Ankoatra izany, dia ho afaka hanamarina ny fomba fiantraikan'ireny backlinks ireny amin'ny tranokalan'ny Website Analyzer Source .